Apple nwere ike ịmalite Apple Watch na njikọ LTE | Akụkọ akụrụngwa
Apple nwere ike ịmalite Apple Watch na njikọ LTE
Ruben gallardo | | Apple, smartwatch
Apple nwere ike ịmalite a Apple Watch ndị ọzọ nọọrọ onwe ha nke iPhone. Dị dị ugbu a kwesịrị ijikọ ya na smartphone site na Apple iji nata ozi; nwee ike ịchọ ebe dị na eserese ma ọ bụ chịkwaa ngalaba egwu. Otú ọ dị, dị ka kwuru si BloombergNa njedebe nke afọ, ngagharị Apple ga-elekwasị anya na ịmalite igwe elekere nwere njikọ LTE.
N'ụzọ nke a, ha na-ekwu, ndetuta ọkpụkpọ enwere ike ibudata na Spotify -n’ihi na ihe atụ- ma ọ bụ enwere ike izipu ozi na WhatsApp n’enweghị anụ ahụ nwere iPhone n’oge ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ ohere dị iche iche ga-emepe obere ntakịrị.
N'otu aka ahụ, Intel abanyekwala na egwu a, otu n'ime ndị nrụpụta siri ike ịbanye n'ahịa emechiri emechi nke ngwaọrụ mkpanaka Cupertino. O doro anya, dị ka isi mmalite sitere na ọnụ ụzọ na Mark Gurman, Intel ga-abụ onye na-enye mgbawa na modem jikọtara ya na ụdị Apple Watch a bụ eziokwu. Nke ahụ bụ na Intel adịlarị na kọmputa Apple mana ọ nweghị akụkụ nke ngalaba ahụ na-eweta ọtụtụ elele ụlọ ọrụ nke Steve Jobs guzobere.
Ka ọ dị ugbu a, Apple na ndị ọrụ mkpanaka dị iche iche na - enwe mkparịta ụka - ha ga - ete aka ha - iji hụ onye ga - enwe ike iweta ụdị smart smart a. Agbanyeghị, o doro anya na a ga-enwe ọtụtụ ndị nwere mmasị ịnwe ngwaọrụ ọhụrụ a n'etiti ọkwa ha. Na Na United States, aha ndị dịka AT&T, Verizon, Sprint ma ọ bụ T-Mobile agafeelarị; Mkparịta ụka na-aga n'ihu na Europe mana onwebeghị aha ọ bụla ekpuchiela.
Mana n'echiche nke abụọ, egwuregwu ahụ nwere ike ịga n'ihu. Ma ọ bụ ime ka Apple Watch nweere onwe ya karịa nke ekwentị ma nke ahụ nwere ike ịrụ ọrụ n'onwe ya, nwere ike ime ka ọha na eze nwekwuo mmasị na ya wearable. Nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na ịzụta nke ekwentị mkpanaaka ọhụrụ enweghị njikọ na smartwatch, ahịa ahụ nwere ike ibu ibu na-amalite ịrị ọnọdụ na mpaghara ahụ wearable ebe Xiaomi bụ eze nwanyị agbaghaghi ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Apple nwere ike ịmalite Apple Watch na njikọ LTE
Samsung Galaxy Note 8 ga-aga ahịa na September 15
Boeing na-ese onyinyo ụgbọelu n'oge ụgbọ elu ule